Experts Bemoan Zimbabwe Water Woes - allAfrica.com
Experts Bemoan Zimbabwe Water Woes
Water experts say Zimbabwe is not doing well in terms of providing clean water and sanitation to communities in both urban and rural areas.
Urban Zimbabweans are struggling with water shortages.
Zimbabwe: Experts Bemoan Zim Water Woes
ZIMBABWE is not doing very well in providing clean water and sanitation to communities in both urban and rural areas, a water expert has said. Read more »
Zimbabwe: Residents Shun Tap Water
The Herald, 25 September 2012
Residents in most Harare suburbs are resorting to borehole water, shunning that from taps which they view as of poor quality. Read more »
Zimbabwe: MDC-T Ministers Taken to Task
Financial Gazette, 19 September 2012
The MDC-T Bulawayo provincial executive met with the two MDC-T ministers along with legislators and councillors from the three Matabeleland provinces recently to discuss how the… Read more »
Zimbabwe: BCC Moves in to Ease Water Shortages
MDC, 11 September 2012
The Bulawayo City Council has moved in to ease the water crisis that is affecting the city, as some of its dams have now been de-commissioned due to low levels of water. Read more »
Zimbabwe: 'Poisonous' Water Treatment Saga Deepens
A director with a local transport company together with a clearing agent have appeared in court following the delivery of a poisonous chemical to treat water in the country's ... Read more »
Zimbabwe: Cyanide Case Lands Another Boss in Court
Zimbabwe: Poison Saga Deepens
Uganda's Oldest Chimpanzee Zakayo Dies